Ana m anwale Ngwunye Ọhụrụ Twitter | Martech Zone
Ana m anwale Ngwunye Ọhụrụ nke Twitter
Fraịdee, Nọvemba 3, 2017 Fraịdee, Nọvemba 3, 2017 Douglas Karr
Twitter na-anwale usoro mgbasa ozi beta ebe ha na-eme ka tweets dịkwuo elu. Ọ bụ $ 99 kwa ọnwa ma ị họrọ ọdịdị mbara ala yana ụfọdụ edemede iche. Aka m na-enwe mmasị na Twitter ma onyinye a masịrị m, yabụ mgbe m natara email na-arịọ m ka m sonyere beta, m ga-asị ee.
Achọrọ m ịkekọrịta ụfọdụ echiche na-enweghị isi ka m nwee ike ịlaghachi na post a ma hụ mmetụta ọ dị.
Dabere na Google Analytics, okporo ụzọ m si na Twitter abanyela ihe karịrị otu narị nleta kwa ọnwa. (Ọ dịbu puku).
M nwere 35,800 na-eso ụzọ na Twitter na m kwukwara ka ọtụtụ dị ka Ndị na-eso ụzọ 150 n'otu ọnwa. Enwere m ihe karịrị 500 kwuru banyere otu ọnwa na ihe gbasara nleta profaịlụ 8,000.
Yabụ, ejiri $ 99 mee ihe, aga m atụ anya ịnweta ndị ọbịa 1,000 na ọnwa na-abịa na mmụba dị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ. Anyị ga-ahụ, n'agbanyeghị!
Kedu ihe kpatara m ga-eji jiri $ 99 mee ihe na Twitter?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara m ji họrọ ime ule a:
I dị ka Twitter. Oge ọ bụla m mepere Twitter, ana m ahụ mmelite ọhụrụ na nke na-atọ ụtọ site na ndị mụ na ha anaghị arụkọ ọrụ. Na Facebook, ọ bụ otu ndị ahụ. Achọrọ m Twitter ka m sọọ mpi ma lanarị. Ọfụma, ọ bụrụ na i mepebeghị ngwa Twitter na nwa oge, na-awụli elu na nchọta ọchụchọ / nchọpụta ma ị ga-ahụ ihe na-atọ ụtọ.
Ekwuru m ugboro ugboro na afọ ole na ole gara aga na ọ bụrụ na Twitter ebubo maka ịnweta API, ha nwere ike wepu onwe ha ozugbo nke bọọlụ adịghị mma na akaụntụ SPAM. Ikekwe nke a bụ mmalite nke ahụ. Cheedị ma ọ bụrụ naanị ndị na-akwụ $ 99 kwa ọnwa nwere ike ịnụ olu ha - ekwenyere m na mkparịta ụka ahụ ga-abụ nke ọma.
Di na nwunye nwere nsogbu ole na ole m lere ule a:
Ọnụ ọgụgụ nke edemede ịhọrọ sparce. Enwere m ike ịhọrọ azụmahịa na teknụzụ, ọ nweghị nhọrọ ịzụ ahịa ọ bụla. Nke ahụ na-emetụta m na m tweets na-agbasawanye nwere ike ọ gaghị adị mkpa nye ndị na-ahụ ụda tweets.
Naanị m nwere ike ịgbalite beta na m akaụntụ Twitter nkeonwe n'agbanyeghị na ọ bụ nhọrọ mgbasa ozi azụmahịa. Ọ dị m ka ya bụrụ na Twitter gaara ahapụ m ka m mepee akaụntụ ahụ @IGIHE or @dknewmedia, ma ha enweghị oke mmetụta ka ahọpụtara.
Achọrọ m ka Twitter dịrị ndụ ma achọrọ m ịhụ asọmpi na Facebook. Ọ bụrụ na ị kwenyere na mmemme a dị njọ, ọ bụghị ihe ọjọọ karịa Facebook na-agba anyị niile ume ka anyị wulite obodo anyị, ma na-akwụ anyị ụgwọ ka anyị nweta ozi n'ihu ha.
Lelee azụ ebe a kwa izu ma aga m eme ka ị mara ka mmụba Twitter si arụ ọrụ.
Tags: dknewmediaChidinmaTwittermgbasa ozi twitterIdozi twittertwitter bulie
Usoro kachasị mma ịmalite site na mgbasa ozi Facebook
Nov 7, 2017 na 6:08 PM
Enwere m nkwekọrịta zuru oke. M na-ahụkarị Twitter n'anya ma na-eme ya. Nke a nwere ike!
Enwere m olile anya na ị gwara ha ndụmọdụ gị. Ọ bụ Beta, ka emechara. Ọ bụ ya mere anyị ji nwee Betas iji nweta nzaghachi maka ihe achọrọ ịgbakwunye.
M ka na-etinye na akaụntụ Facebook na ibe m, mana ọ ga-abụ ụbọchị oyi na hel tupu m ejiri ego ọ bụla na mgbasa ozi FB.
Nov 7, 2017 na 6:11 PM
Ekwenyesiri m ike, Lydia!